ယရှေုသညျလေးထောင် (: 1-9 မာကု 8) Feeds
လူအစုအဝေးအလွန်ကြီးသောဖြစ်ခြင်းနှင့်စားရန်ဘာမျှရှိခြင်း 1 ထိုကာလအခါ, ယရှေုသညျတပညျ့တျောတို့ကိုခေါ်ခြင်းငှါအမိန့်တော်ရှိသည်ဟု,2အခုသူတို့သည်ငါနှင့်အတူသုံးရက်ရှိခဲ့နှင့်ဘာမျှရှိသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါလူအစုအဝေးအပေါ်သနား3ထိုအခါငါသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်များစာမစားမှီသူတို့ကိုလွှတ်လိုက်လျှင်, သူတို့သည်လမ်းဖြင့်မောပါလိမ့်မယ်: ကိုစားသူတို့အထူးထူးအပြားပြားဝေးမှလာ။4ထိုအခါတပညျ့တျောတို့သသည်လူကိုဤနေရာတွင်တော၌မုန့်နှင့်ဒီလူကျေနပ်အောင်နိုင်ပါတယ်ဘယ်ကနေသလော5ထိုသူသည်အများသောမုနျ့သငျတို့သတိုကိုဘယ်လို, သူတို့ကိုမေး ထိုသူတို့ကခုနစ်ကပြောသည်။
6 ထိုအခါသူသည်မြေပြင်ပေါ်တွင်ထိုင်ဖို့လူတွေကိုမှာထားတော်မူသဖြင့်, သူသည်ခုနစ်ပါးသောမုန့်ကို ယူ. ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနှင့်ဘရိတ် ပေး. , သူတို့ရှေ့မှာတင်ထားရန်ပည့်တော်တို့အားပေးတျောမူ; သူတို့ကိုလူတို့ရှေ့မှာ ထား. ခဲ့ပါဘူး။7ထိုသူတို့ကအနည်းငယ်သေးငယ်တဲ့ငါးရှိခဲ့ပါတယ်: သူ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ များနှင့်သူတို့ရှေ့မှာလည်းသူတို့ကိုတင်ထားရန်မှာထားတော်မူ၏။ 8 သို့ဖြစ်. သူတို့သည် စား. ပြု. , ပြည့်စုံသဖြင့်, ထိုသူတို့သည်ခုနစ်ခုတောင်းကျန်ကြွင်းသောကျိုးအသားကိုတက်ယူခဲ့ပါတယ်။ စားပြီးမှ9ထိုသူတို့နှင့် ပတ်သက်. လေးထောင်ရှိသတည်း: သူကသူတို့ကိုလွှတ်လိုက်ကြ၏။
နှိုငျးယှဉျ: မဿဲ 15: 32-39
အခန်း6ရဲ့အဆုံးမှာကျနော်တို့မုန့်ငါးလုံးနှင့်ငါးနှစ်ကောင်နှင့်အတူလူငါးထောင် (ကိုယ့်လူတို့သညျမဟုတျဘဲအမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများ) နို့တိုက်ကျွေးမှုသညျယရှေုကိုမြင်တော်မူ၏။ ဤတွင်သညျယရှေုခုနစ်ခုမုနျ့ငါးလုံးနှင့်အတူ (အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများကဤအချိန်ကိုစားရ) လေးထောင်ကလူ feeds ။
ယရှေုသညျအဘယ်မှာဖြစ်ပါသည်, အတိအကျ? ကျွန်တော်တို့ဟာကျအခနျး6မှာသူ့ကိုထွက်ခွာသောအခါ, ယရှေုသညျ၌ရှိ၏ "ပေါ၏ကမ်းရိုးတန်း၏အလယ်။ " သောပေါ၏ဆယ်မြို့၏အရှေ့ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးခဲ့ကြသည်ဟူသောအချက်ကိုရည်ညွှန်းတာလား ဂါလိလဲပင်လယ် နှင့် ဂျော်ဒန်မြစ် သို့မဟုတ် ယရှေုသညျပေါနှင့်ဂျူးဒေသများအကြားနယ်စပ်တလျှောက်ရှိသနည်း
တချို့က (NASB) "ပေါ၏ဒေသအတွင်း" နှင့် "ပေါ၏ဒေသ၏အလယ်" (NKJV) တွင်အတိုင်းဤဘာသာပြန်ဆို။
ယရှေုသညျပေါသို့ခရီးထွက်လျှင်, သူကမှအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည် တပါးအမျိုးသားတို့သည် ယုဒလူတို့နှင့်အတူကောင်းသောဝေါဟာရများအပေါ်မဟုတ်ကြတဲ့သူ။
စာသားခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များဖြစ်ပါသလား ယရှေုသညျကယ့်ကိုလှည့်ပတ်သွားနှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါ အံ့ဖှယျအမှု ကြောင့်လူအမြောက်အများအစားအစာ၏သေးငယ်တဲ့ပမာဏအပေါ်ကျွေးမွေးနိုင်နိုင်အောင်? ဒါကဖွယ်ရှိမဟုတ်ဘူး - သညျယရှေုကိုတကယ်ထိုကဲ့သို့သောပါဝါရှိခဲ့လျှင်ထောင်ပေါင်းများစွာမုန့်ပဲစုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူကူညီပေးခဲ့သည်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာယနေ့သေသတ်ခြင်းကိုအမှန်ငတ်ခံရဖို့အဘို့ပြုလုပ် unconscionable ပါလိမ့်မယ်။
ပဲအလားတူအခြေအနေများအောက်တွင် 5000 ကျွေးမွေးခဲ့တောင်မှကြောင့်ဘေးဖယ် setting, ယရှေုသညျအဘို့အဘယ်သူမျှမသဘာဝကျပါတယ် 'ယရှေုသည့်အခါမေးရန်တပည့် "ဘယ်ကနေလူတကဒီမှာတော၌မုန့်နှင့်ဒီလူကျေနပ်အောင်နိုင်ပါတယ်'" ။ သူ့ကိုအတူလိုက်ပါဖို့သူတို့ကိုကောက်နေများအတွက်မေးခွန်းထုတ်စရာထောက်လှမ်းရေးသားယရှေု - ဤဇာတ်လမ်းသမိုင်းဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, တပည့ပြင် morons ခဲ့ကြသည်။ တပည့်သဘောသဘာဝသည်သူ၏သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပြီးနောက်သည်အထိဖြစ်ပေါ်နိုင်ဘူး '' သဘောပေါက်နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းသည်အကောင်းဆုံး, Mark ဘို့, ယရှေု၏စစ်မှန်တဲ့နားလည်မှုသောစိတ်ကူးတို့ကရှင်းလင်းထားပါသည်။
အများစုမှာတစ်ဦးပုံဆောင်ထုံးစံ၌ကဤပုံပြင်များဖတ်ပါ။ မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်မုန့်, ​​ဒါပေမယ့်ဝိညာဏ "ပေါင်မုန့် - ခရစ်ယာန်ဓမ်မပညာရှငျမြားနှင့် apologists ဤပုံပြင်များ၏" ပွိုင့် "ဟုယရှေုမည်သူမျှမများကဲ့သို့အစားအစာဆန့်, ဒါပေမယ့်ယရှေုသညျ" မုန့် "အတွက်-အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှအရင်းအမြစ်ကြောင်းနိုငျသောစိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါ။ "
ယရှေုသညျကိုယ်ထိလက်ရောက်ငတ်မွတ်အစာကျွေးနေသည်, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအရေးကြီးတာကမိမိသွန်သင်ချက်နဲ့သူတို့ရဲ့ဝိညာဏ "ဆာလောင်မွတ်သိပ်" "နို့တိုက်ကျွေးမှု" ဖြစ်ပါတယ် - နှင့်ပေမဲ့သွန်သင်ချက်တွေကိုဖွင့်သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုဆာလောင်မွတ်သိပ်သောလူအစုအဝေးတို့သည်ကျေနပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ထက်ပိုမိုဖြစ်ပါသည်, ရိုးရှင်းသောများမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်အသက်တာ၏သဲကန္တာရထဲမှာ၏တစ်ခုတည်းသောရင်းမြစ် - စာရှုသူများနှင့်နားထောင်သူတို့ကယ့်ကိုလိုအပ်သောအရာကိုစဉ်းစားစေခြင်းငှါအနေဖြင့်ပစ္စည်းသည်နှင့်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များအတွက်ပံ့ပိုးကူညီစေခြင်းငှါနေစဉ်, အဖြစ်မှန်တှငျအဘယျသူတို့အမှန်တကယ်လိုအပ်ဝိညာဉ်ရေးရာကြောင်းသင်ယူဖို့ထင်နေကြတယ် ဝိညာဏ "မုန့်" ယေရှုဖြစ်ပါတယ်။
အနည်းဆုံးတော့ဒီဇာတ်လမ်းကိုများအတွက်ရိုးရာ exegesis ပါပဲ။ လောကစာဖတ်သူတွေကဒီမာကု themes များအရှိန်မြင့်နှင့်သူ၏အစီအစဉ် underscore တစ် doublet ကိုအသုံးပြုသည်အဘယ်မှာရှိအခြားဥပမာအားဖြင့်ကြောင်းစောငျ့ရှောကျ။ တူညီတဲ့အခြေခံပုံပြင်များဟာအထပ်ထပ်အိမ်မှာမာကု၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုမောင်းထုတ်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့သာအသေးအဖှဲမူကွဲတွေနဲ့ထပ်ခါထပ်ခါပေါ်ပေါက်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်မာကုနှစ်ကြိမ်အလားတူဇာတ်လမ်းအသုံးပွုခဲ့ - တကယ့်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပျက်ကြပါပြီနိုင်မည်နည်း ပိုပြီးကျနော်တို့ (နံပါတ်များခုနစ်ခုနှင့်တကျိပ်နှစ်ပါးကဲ့သို့ခိုင်မာတဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေရှိသည်ဖို့လေ့ဘယ်လိုသတိထားမိ) အချိန်နှင့်အမျှအပြောင်းအလဲများမှတဆင့် သွား. ကွဲပြားခြားနားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဝယ်ယူတစ်ခုဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါးစပ်အစဉ်အလာရှိသည်။ "နှစ်ဆ" ထားပြီးပြုလုပ်နှစ်ခုသီးခြားပုံပြင်များဖြစ်လျှင်အဖြစ်ထို့နောက်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးထပ်ခါတလဲလဲကြောင်းတဦးတည်းပုံပြင်: တစ် doublet သည်အဘယ်အရာသည်။
မာကုဖြစ်ကောင်းရိုးရှင်းစွာပဲသူယေရှုအကြောင်းရှာတွေ့နိုင်ကြောင်းပုံပြင်များအပေါငျးတို့သထပ်ခါထပ်ခါ၏မျက်နှာကို ထောက်. နှစ်ကြိမ်ကပြန်လုပ်မပေးပါဘူး။ နှစ်ဆလိုသောရည်ရွယ်ချက်များ၏စုံတွဲတစ်တွဲဆောင်ရွက်ပါသည်။ နှစ်ခုကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးသည်ကျက်စားလျက်တစ်ကြိမ်ကလုပ်နေတာထက်ပိုပြီးအထင်ကြီးဖြစ်ပါသည် - ပထမဦးစွာယရှေုသညျဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို၏သဘောသဘာဝ heightens ။ ဒုတိယအချက်မှာနှစ်ခုပုံပြင်များသန့်ရှင်းမှုနှင့်အစဉ်အလာနှင့် ပတ်သက်. သွန်သင်ချက်တွေကိုဘောင် - အကြာတွင်စူးစမ်းပြဿနာ။
ဂျေရုဆလင် (: 1-11, Mark 11) သို့ယေရှုရဲ့ Entry '
မာကု၏အဆိုအရအဆိုပါခရစ်ဝင်ကျမ်း, အခန်း 8
ယရှေုသညျရေအပေါ်လမျးလြှောကျ: တစ်မုန်တိုင်း (မာကု 6: 45-52) အတွင်းမှာတော့ယုံကြည်ခြင်းက
El formulario ငါ-129F Paso llenar Cómoတစ် Paso
အလက်ဇန်းဒါး Gardner, ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဓာတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ဦး
ထိပ်တန်း 10 ဦးအသံလွှင့်သီချင်းများ
Capricorn အတွက် pluto (2024 မှ ​​2008) - ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ဘဝ
မည်သို့တစ်ဦးကရုပ်ပြစာအုပ် Inker Be ရန်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတအဘို့ကို run အမျိုးသမီးများသမိုင်း
Rory Gallagher အယ်လ်ဘမ်ဝယ်လမ်းညွှန်
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဘင်နီဒစ် II ကို
2000 WWF PPV အတွက်ရလဒ်များ
အငြင်းအခုံအတွက် Reductio ကြော်ငြာ Absurdum
အင်္ဂလိပ် Grammar အတွက်ဖြစ်ရပ်မှန်နားလည်ခြင်း
အဆိုပါ Peak မရဏလူမျိုး၏သမိုင်းနှင့်ဝိညာဉ်တော်သည်
ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေ Mass ဖို့အကြောင်းရင်းရောမကက်သလစ် Go ကိုနားလည်ခြင်း
Chiggers တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ Get လုပ်နည်း
စတိုင်, Fit, နှင့်အသံ: ပုတ်ဖိနပ်ဝယ်